Total visits: 562054
Hormuud News Thursday, April 19th, 2018 | 15:58
[Monday, January 8th, 18] :: Madaxweynaha oo xarriga ka jaray garoonka diyaaradaha Garoowe
Garoowe (RH) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fedaraalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah si rasmi ah xarriga u jaray garoonka diyaaradaha ee Janaraal Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garoowe.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in lagu casuumo daahfurka garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe oo dhawaan dhismiisa uu dhammaaday.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isna wax ka furay garoonka munaasabadda loo sameeyay ayaa sheegay in Puntland ay ka go’an tahay in la dhiso garoomada diyaaradaha ee ku yaalla Puntland.
“2014-kii annigoo jooga London ayaan waxaan idin iri, Hal sanno hal garoon, labo sanno labo garoon saddex sanno saddex garoon”ayuu yiri madaxweynaha Puntland oo xafladda daahfurka garoonka ka hadlay.
Madax fara badan ayaa goobjoog ka ahayd xafladda daahfurka garoonka diyaaradaha Janaraal Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garoowe.
“Waxaan u imid inaan arko xaaladda halkan ka jirta, ayna ugu horreyso inaan nabadda xoojinno oo ka shaqeyno dib-u-heshiisiinta, waxaana jeclahay inaan tago dhawr magaalo oo aan la kulmo cuqaasha, aqoonyahanka, bulshada rayidka ah iyo ardayda Jaamacadaha.” Ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Madaxtooyada Puntland.
Sidoo kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa guddoomiyay shirka todobaadlaha ah ee Golaha Xukuumadda Puntland oo lagaga hadlay arrimaha amniga iyo horumarinta dhaqaalaha, waxa uuna warbixinno ka dhageystay xubno ka mid ah Golaha Wasiirrada Puntland.
Diyaaraddii uu la socday madaxweyne Farmaajo markii shaley gaaray Puntland ayaa noqotay diyaaradii ugu horreysay ee soo caga dhigata garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe.
Wafdiga madaxweyaha Soomaaliya ayaa maalintii labaad ku sugan Puntland, waxaana la filayaa madaxweynaha in uu booqdo magaalooyin kale oo ku yaalla Puntland sida Boosaaso.
Waa safarkii ugu horreeyey ee madaxweyne Farmaajo uu ku tago Garoowe iyo Puntland tan iyo markii loo magacaabay xilka sideedii Febraayo sannadkii 2017-ka.
Madaxweynaha ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay Garoowe.